Ukuziphatha komntu ngamnye: Izihloko kunye neengcamango kwiCistoralist Thinking
Izihloko kunye neengcamango kwi-Existentialist Thinking
Imigaqo yokuzibandakanya ibonakala ngokugxininiswa ekuziphatheni ngokuziphatha. Esikhundleni sokufuna "okulungileyo kakhulu" okuya kuba yinto yonke, abantu abanokuzibandakanya baye bafuna indlela yokuba umntu ngamnye afune into ebaluleke kakhulu kubo , kungakhathaliseki ukuba iyakwenza isicelo nawuphi na umntu nangaliphi na ixesha.
Isisiseko esisisiseko sefilosofi yokuziphatha kwimbali yefilosofi yaseNtshona yenze isilingo sokwakha inkqubo yokuziphatha evumela abantu ngamaxesha onke nakuzo zonke iimeko ukuba bakwazi ukuqonda oko bafanele bayenze ngokuziphatha kwaye kutheni.
Abafilosofi abahlukahlukeneyo baye bathatha "izinto ezilungileyo kakhulu" eziza kuba zifana nabantu bonke: ukuzonwabisa, uvuyo, ukuthobela uThixo, njl njl.
Kodwa, oku kunjalo, akuhambelani nefilosofi ye-existentialist kumanqanaba amabini abalulekileyo. Okokuqala, ixhala malunga nokuphuhliswa kwenkqubo yefilosofi kwaye ayihambisani neengcambu ezibalulekileyo zefilosofi. Iinkqubo ziyimvelo yazo, ngokuqhelekileyo akakwazi ukuqwalasela iimpawu ezizodwa zobomi ngabanye kunye neemeko ezithile. Kwakusabela ekuchasene nale nto ifilosofi yefilosofi iye yanda kwaye yazichaza yona, ngoko ke kulindeleke kuphela ukuba ababenokuthi babekho iimeko zokuziphatha.
Okwesibini, kwaye mhlawumbi okubaluleke ngakumbi, abahlala bekhona behlala begxile ekuziphatheni, kubomi bomntu ngabanye. Akukho nto isisiseko kwaye inikezwa "ubuntu buntu" obuqhelekileyo kubo bonke abantu, ukuphikisana nabanikazi beentlanga, kwaye ngoko umntu ngamnye kufuneka achaze ukuba lithetha ukuthini umntu kwaye ziziphi ixabiso okanye injongo eza kulawulo kulabo ubomi.
Imiphumo ebalulekileyo yale nto kukuba akukho nanye isethi yemilinganiselo yokuziphatha eya kusebenza kubo bonke abantu ngamaxesha onke. Abantu kufuneka benze izibophelelo zabo kwaye babe noxanduva lwabo ngokhetho ngokungabikho kwemilinganiselo yendalo yonke ukuba baholele - nangamaKristu angenazo izinto ezifana noSøren Kierkegaard baye bagxininisa oku.
Ukuba akukho migaqo yendlela yokuziphatha okanye nayiphi na indlela enengqiqo yokuthatha isigqibo malunga nemilinganiselo yokuziphatha, ngoko akukho ndlela yokuziphatha esebenzayo kubo bonke abantu ngamaxesha onke nakwiindawo zonke.
Ukuba amaKristu angama-existentialists ayamkele le miphumo yemigaqo-siseko ye-existingististist, abantu abangakholelwa kuThixo abangakholelwa kuThixo baye baqhubela phambili. UFriedrich Nietzsche , nangona mhlawumbi wayengazange amkele i-label ye-existentialist, nguye umzekelo obalaseleyo. Umxholo oyintloko kwimisebenzi yakhe yinto yokuba ukungabikho kukaThixo kunye nenkolelo kwimilinganiselo epheleleyo kuthetha ukuba sonke sikhululekile ukuhlaziywa kwakhona kwiimpawu zethu, ezikhokelela kwimeko entsha yokuziphatha "yokuqinisekisa ubomi" engathatha indawo yamasiko "Umgangatho wokuziphatha" wamaKristu amasiko aqhubeka elawula uluntu lwaseYurophu.
Akukho nanye kule nto kukuthi, nangona kunjalo, ukuba ukhetho lomntu oyedwa lwenziwa ngokuzimela ngaphandle kwezinye izigqibo zokuziphatha kunye neemeko zabanye. Ngenxa yokuba sonke siyinxalenye yamacandelo ezentlalo, zonke iinqunto esenzayo - eziphathekayo okanye ngokunye-ziya kuba nefuthe kwabanye. Nangona kungenjalo ukuba abantu bafanele bazise izigqibo zabo zokuziphatha kwizinto ezintle "ezintle," yimeko yokuba xa benza ukhetho abajongene nemiphumo kubo kuphela, kodwa nemiphumo kwabanye - kuquka, ngamanye amaxesha, abanye bakhetha ukuthobela ezo zigqibo.
Oko kuthetha ukuthini ukuba nangona ukhetho lwethu alukwazi ukunyanzelwa yimilinganiselo epheleleyo esebenzayo kubo bonke abantu, kufuneka sithathe ingqalelo ukuba kungenzeka ukuba abanye bazenze ngendlela efana nathi. Oku kufana ne-Kant's imperative impecation, ngokubhekiselele kuloku kufuneka senze kuphela ezo zenzo esiza kwenza ukuba wonke umntu enze ngendlela efanayo nathi. Kuba ngababenokuzibandakanya kwizinto ezi zinto akusiyo imithintelo yangaphandle, kodwa ingqalelo.
Abantu abanamhlanje baqhubeka bekhula kwaye bahlakulele ezi ngqungquthela, bahlola indlela abantu abasemgangathweni abanokuzilawula ngayo ukudala iimpawu ezinokubangela ukuzinikela kwimilinganiselo yokuziphatha ngokuzimeleyo kwaye ngaloo ndlela bavumele ukuba baphile ngobomi bokwenyaniso obukhululekile ukholo olubi okanye ukungathembeki.
Akukho mvumelwano yesizwe malunga nendlela ezinokuthi zifezekiswe ngayo ezo njongo.
Inkcazo yokuBambisana kweNyaniso
Fumana indlela yokulungisa iinqwelo zeebhayile zokunciphisa ukuzwa phambi kokuba ufeze
Izixhobo Zokukunceda Ufunde Ama-13 Amanqaku Okholo Nembali Yabo